२० नि: शुल्क उत्तरदायी HTML20 खुला स्रोत र CSS5 टेम्पलेट्स | क्रिएटिव अनलाइन
उत्तरदायी HTML5 टेम्पलेट्स
तल तपाई २० भेट्न सक्नुहुन्छ नि: शुल्क HTML5 र CSS3 वेब टेम्प्लेटहरू त्यो उत्तरदायी भएर उत्कृष्ट डिजाइन र लचकता प्रदान गर्दछ। यो सबै HTML5 टेम्पलेटहरू तिनीहरूसँग एक उत्तम डिजाइन छ र उन्नत प्रकार्यहरू समावेश गर्दछ जुन तपाईंको अनलाइन कामको लागि काममा आउन सक्छ।
केही २० को गुणहरू मध्ये एक उत्तरदायी HTML5 टेम्पलेट्स यो तपाइँको हो कुनै पनि प्लेटफर्मको साथ अनुकूलता, कुनै पनि ब्राउजर र तिनीहरूले सजिलो तरिकामा त्रुटिहरू ह्यान्डल गर्दछन्। यदि तपाइँ तपाइँको वेबसाइट को लागी एक डिजाइन खोज्दै हुनुहुन्छ जुन यस नयाँ वर्षको डिजाईन प्रवृत्ति बोक्छ, अगाडि जानुहोस् र यी उत्तरदायी वेब टेम्प्लेट मध्ये एउटा समात्नुहोस्।
1 मद्दत हात
2 हिम स्केटि।
9 कृषि फर्म
10 कोस्टामर ट्राभल
11 ठूलो चित्र
13 KreativeP पिक्सेल
15 उत्तम गन्तव्य
16 बाक एक
एक पेशेवर टेम्पलेट, सफा र स्पष्ट जुन प्रयोगकर्ताको आवश्यकताको लागि अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
हामी जाडोमा र यस समयका लागि टेम्प्लेटभन्दा राम्रो के हो र स्कीइ as जस्ता खेल प्रशंसकहरूको लागि। अघिल्लो जस्तो यो निजीकृत गर्न सकिन्छ।
अन्य उत्तरदायी HTML5 टेम्पलेट जुन तपाईं याद गर्न सक्नुहुन्न।
२ स्तम्भ र एक संग लेआउट «फिक्स चौड़ाई W अत्यावश्यक टेम्प्लेट हुन सक्छ।
नि: शुल्क टेम्पलेट HTML5 का साथ डिजाइन गरीएको र अन्तर्गत जारी गरियो साझा रचनात्मक इजाजतपत्र 3.0.०.
एक HTML5 र CSS3 वेब टेम्पलेट को साथ एक नीलो र सेतो रंगमा जोड सबै प्रकारका व्यवसायका लागि।
तपाईंको वेबसाइट, मोबाइल उपकरणहरू, नयाँ उत्पादनहरू वा अन्य उद्देश्यहरूको लागि अनुप्रयोगको लागि डिजाइन। उत्तरदायी र छ सबै प्रकारका उपकरणहरूमा उत्कृष्ट देखिन्छ.
CSS० सीएसएस फारमहरू जुन कुनै पनि वेबसाइटमा हराउन सक्दैन
का लागि उत्तरदायी टेम्प्लेट शैक्षिक विषयवस्तुको साथ वेबसाइटहरू.
सबै प्रकारका व्यवसायहरूका लागि जुन कृषिसँग गर्नुपर्दछ यो उत्तम टेम्प्लेट हो।
एउटा टेम्पलेट व्यावसायिक र सफा ट्राभल एजेन्सीहरूको लागि। तपाईलाई चाहानु भएको अनुसार यो व्यक्तिगतकृत गर्न सकिन्छ।
अर्को टेम्प्लेट उच्च गुणस्तर.
Un मोबाइल उपकरणहरूको लागि नि: शुल्क टेम्पलेट। छवि ग्यालरी र अधिक जस्तै सुविधाहरू।
जो मानिसहरु लाई थाहा छ वेब डिजाइनबाट सुरू गर्नुहोस्.
Especial फोटोग्राफरहरूको लागि टेम्प्लेटव्यक्तिगत र कर्पोरेट वेबसाइटहरू।
Para ट्राभल एजेन्सी वा पर्यटक गाईडहरू।
यो को लागी सेवा गर्दछ सबै प्रकारका अभिप्रायहरू वा विषयगत।
मा आधारित ट्विटर बुटस्ट्र्याप फ्रेमवर्क।
El हरियो र गाढा खैरोमा उच्चारण र केहि अन्य बहुभुज आकार।
con आकर्षक आकारहरू र एक पृष्ठ लेआउट।
Sections सेक्सन रोलरको साथ राम्रो छ फोटोग्राफरहरूको लागि टेम्प्लेट.
यी कुनै पनि को फाइदा HTML5 टेम्पलेटहरू त्यो हो कि तपाईं तिनीहरूलाई तपाईंको मनपर्दोमा परिमार्जन गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई मर्मतको आवश्यकता पर्दैन जस्तो कि वर्डप्रेस जस्ता केही सामग्री प्रबन्धकहरूसँग हुन्छ जसमा तपाईंले प्लगइनहरू अपडेट गर्नुपर्दछ र कोर प्रत्येक थोरै समय।
यदि तपाईं धेरै लैंडिंगको साथ उत्तरदायी वेब प्रोजेक्ट सेट अप गर्न चाहनुहुन्छ भने उत्तरदायी वेब टेम्प्लेटहरू तिनीहरू उत्तम विकल्प हुन् किनभने मर्मत आवश्यक पर्दैन साथै तिनीहरूको लोडिंग समय कुनै सीएमएस भन्दा कम हुनेछ।
के तपाईंलाई अधिक स्थानहरू थाहा छ जहाँ तपाईं समात्न सक्नुहुन्छ नि: शुल्क उत्तरदायी HTML5 टेम्पलेटहरू? हामीलाई एउटा टिप्पणी दिनुहोस् र वेब डिजाइनरहरूको लागि उपयोगी संसाधनहरूका प्रकारहरू प्राप्त गर्न तपाईंको संसाधनहरू हामीलाई भन्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » टेम्प्लेट » उत्तरदायी HTML5 टेम्पलेट्स
तपाईले यस पोष्ट मार्फत प्रस्ताव गर्नुभएको सुझावहरूका लागि धन्यवाद।
यो धेरैलाई ठूलो सहयोगी हुनेछ।
मेरो केसमा मैले ब्लगरमा प्रयोग गर्नको लागि टेम्प्लेट किनेको छु, यो "उत्तरदायी एचटीएमएल 5" हो।
तथ्य यो हो कि, मैले सोचेँ कि जब म यो किनेको छु, यो केही गाईडको साथ आउँदछ, मलाई मद्दत गर्ने नमूना टेम्पलेटको रूपमा यसलाई राख्न मद्दत गर्न। तर होईन, यसले केहि पनि ल्याएको छैन, जसले मलाई यो बेच्यो उनीसँग आफ्नो ब्लगमा कुनै गाईड हुँदैन र जे भए पनि ... म यसलाई प्रयोग गर्न सक्षम भएकी छैन।
म त्यस्तो व्यक्ति खोज्दै छु जसले यो प्रकारको टेम्प्लेट कसरी काम गर्ने भनेर जान्नलाई तिनीहरूको सेवाको लागि अनुरोध गर्न र मलाई यो परीक्षण ब्लगमा स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ, जुन मैले कोड मात्र प्रतिलिपि गर्नुपर्दछ र ब्लगमा टाँस्न जहाँ म यसलाई प्रयोग गर्न चाहान्छु।
यदि तपाईं कसैलाई चिन्नुहुन्छ वा आफैंलाई, तपाईले मलाई यहाँ टिप्पणी मार्फत थाहा दिन सक्नुहुन्छ?
Briizmarg लाई जवाफ दिनुहोस्
एकदमै राम्रो भन्यो
एपेल हात तपाईलाई पहिले नै थाहा छ कि ब्ल्गरमा टेम्प्लेट स्थापना गर्ने म पनि त्यस्तै अवस्थामा छु
सुपर डुपरलाई जवाफ दिनुहोस्
टेम्पलेटहरूको लागि धन्यवाद
रोनाल्डलाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै राम्रो योगदान डाउनलोड गर्न र म तिनीहरूलाई जाँदैछु। म फेरी आउछु!!!!
के कसैले मलाई बताउन सक्दछ कि कसरी राम्रोसँग टेम्पलेटलाई सन्दर्भित गर्न मेरो वेबसाइटमा क्रिएटिभ कमन्स license. license लाइसेन्सको साथ?
यसको धेरै राम्रो बिरुवा छ, धन्यवाद
ब्याच छवि सम्पादनको लागि Online अनलाइन अनुप्रयोगहरू
प्रक्रिया कहिँ पागल नहुँदा अर्च एभर्नले तपाईंलाई अर्च लिनक्स कडा र छिटो स्थापना गर्न दिन्छ